काठमाडौं । निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणको शुल्क तिर्नुपर्ने समयसीमा जेठ १५ गते अर्थात् आज हो । पाँच प्रतिशत जरिवानासहित २३ अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बताएको छ । आज शुल्क नतिरेको खण्डमा २० अर्ब नविकरणीय शुल्कको पाँच प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने.....
गणतन्त्र दिवसमा टेलिकमको ‘रिपब्लिक डे अफर’, के–के छन् सुविधा ?
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १२:०५
काठमाडौं । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाट टेलिकमले ग्राहकहरुका लागि विशेष अफर ल्याएको छ । दिवसका अवसरमा टेलिकमले ‘रिपब्लिक डे कम्बो प्याक’ अफर ल्याएको हो । टेलिकमका अनुसार यस अफर अन्तर्गत ग्राहकहरुले पचास रुपैयाँमा चार सय एमबी डाटा, ३० मिनेट भ्वाइस कल र सयओटा एसएमएस प्याकेज प्राप्त गर्नेछन् । यो अफर जेठ.....
१० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०८:४५
काठमाडौं । के तपाईं ‘सेकेण्ड ह्याण्ड’ मोटरसाइकल किनबेच गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने तपाईंले ‘भटभटे एप’ प्रयोग गरी घरमै बसेर सजिलै किनबेच गर्न सक्नुहुनेछ । एएम नेपाल प्रालिले ‘भटभटे एप’ प्रयोगमा ल्याएपछि सेकेण्ड ह्याण्ड मोटरसाइकल किनबेच सहज बनेको हो । यसमा मोटरसाइकल बेच्न चाहनेले सजिलै आफ्नो.....
काठमाडौं । तपाईंलाई आवश्यकपर्ने पैसा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कसरी निकाल्नुहुन्छ ? एटीएम मेसिनको प्रयोग गर्नुहुन्छ वा चेकमार्फत गर्ने गर्नुभएको छ ? साक्षर व्यक्तिले सहजै रुपमा एटीएम मेसिनमा कार्ड राखेर सहजै पैसा निकाल्न सक्ला । निरक्षर, कम अध्ययन भएका वा अङ्ग्रेजी भाषा नजान्नेका लागि एटीएमको प्रयोग.....
६ जेष्ठ २०७६, सोमबार १५:४३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजनाको शिलान्यास गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले धादिङको गल्छीमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजनाको शिलान्यास गरेका हुन् । नेपाल टेलिकमले मध्यपहाडी लोकमार्गबाट जिल्ला सदरमुकामहरुलाई सूचनाप्रविधिमा जोड्न यो योजना सुरु गरेको हो । योजनाअनुसार.....
६ जेष्ठ २०७६, सोमबार १३:१७
एजेन्सी । गुगलले चिनियाँ टेक्नोलोजी जाइन्ट कम्पनी हुवावेसँग आफ्नो व्यापारको अन्त्य गर्दै उसको एन्ड्रोएड लाइसेन्स खारेज गरेको छ । रोयटर्स समाचार संस्थाको अनुसार गुगलले हुवावेलाई उसको हार्डवेयरु, सफ्टवेयर र प्राविधिक सेवाहरु प्रसार गर्न बन्द गरेको छ । यो कदमले अबको नयाँ हुवावे फोनहरुमा हुने नयाँ अपडेटलाई.....
५ जेष्ठ २०७६, आईतवार १८:३४
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमद्वारा मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको शिलान्यास सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट हुँदैछ । उक्त शिलान्यास कार्यक्रम सोमबार धादिङको गल्छी गाउँपालिकामा सम्पन्न हुँदैछ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत प्रदेश १, २ र ३ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्बन्धमा.....